Nezvedu - Tianjin Junya Precision Machinery Co., Ltd.
Hunhu-Kutanga, Kusika-Kukosha, Kushanda-Kusagadzikana
Tine fekitori yedu, inogara muHuanghua Guta reHebei Province, iyo inofukidza nzvimbo inopfuura 5,000 square metres.
Tianjin Junya Precision Machinery Co. Ltd ibhizimusi rakanangana nemhando yepamusoro, rinonyanya kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvesimbi isina tsvina.
Tine fekitori yedu, inogara muHuanghua Guta reHebei Province, iyo inofukidza nzvimbo inopfuura 5,000 square metres. Zvinotora maawa maviri chete kubva kudura redu kuenda kuchiteshi chegungwa.
Nemhando yepamusoro uye yakazara yekugadzira mutsara, zvigadzirwa zvedu zvinogona kuiswa kune yakafara siyana, senge michina yemuchina, auto spare parts, kuvaka hardware, zvekurapa uye chikafu mudziyo, migodhi muchina uye ect.
Kuongorora kweWhite Snake Valley
Pakupera kwesvondo pakati paGunyana, Junya Precision Machinery Company vese vashandi vakaenda kuWhite Snake Valley kunovaka timu.Kuitira kukurudzira kutaurirana pakati pevashandi vekambani uye kupfumisa hupenyu hwevashandi, mushure mebasa rinonetsa, vashandi vanogona kuzorora zvizere uye kurovedza muviri. Chikwata chechidiki uye chine simba chevanhu vanopfuura makumi maviri chakarongeka pamwe chete neDhipatimendi Rekutonga Kwevashandi, Dhipatimendi Rekutengesa uye New Media Dhipatimendi kuti vaende kuPanshan "White Snake Valley" kuti vatange chivakwa chechikwata.
Pachivakwa chechikwata ichi, takaronga mitambo yekukwira muWhite Snake Valley, uko kune mamiriro ekunze anotonhorera uye nzvimbo yacho yakanaka. Kwira mugomo kuti uzvidenha, unakirwe nemamiriro ekunze akanaka, uye unzwe mweya chaiwo weokisijeni. Mukati megadziriro yokukwira, vashandi vaibetserana nokukurudzirana, uye nenhamburiko dzakabatana dzomunhu ari wose, vashandi vose vakapedza iri basa rokukwira makomo.
Vashandi havasi kufara chete mumuviri nepfungwa, asiwo vanosimudzira manzwiro emumwe nemumwe. Muchiitiko ichi, munhu wese akataura akasununguka uye akagadzira mamiriro ekubatana.
Shanda nesimba kuti uzvitsvakire zviri nani.Vanofanira kuenderera mberi kune zviroto zvavo vakazvimiririra.Nguva ichakupa zvese zvaunoda，Tinongwarira uye tine hanya pabasa kugadzirisa matambudziko kune vatengi vedu.
Akakwira pamusoro pemarara
Zvinhu zvacho 304, 304L,316,316L, SF8M,WCB,14408, nezvimwewo.
Stainless Simbi Pipe Fittings, Stainless Simbi Faucet, Investment Casting Yakagadzirirwa Machine Chikamu, Safety Valve, Investment Casting Zvikamu, Stainless Simbi 316 Pipe Fitting Cross,